Fundisa Abantwana—Kuya Kwenzeka Ntoni Xa Sisifa?
NJENGOKO usazi, abantu namhlanje bayaluphala, bagule, baze bafe. Nabantwana bakhe bafe. Ngaba ufanele ukoyike ukufa okanye woyike nabani na ofileyo?— Ngaba uyazi ukuba kwenzeka ntoni xa sisifa?—
Noko ke, akakho umntu ophila namhlanje okhe wafa waza wabuyela ebomini ukuze asibalisele ngako. Kodwa xa uYesu, uMfundisi Omkhulu, wayesemhlabeni, wayekho umntu onjalo. Sinokukwazi oko kwenzekayo kwabafileyo ngokufunda ngaye. Lo mntu wayengumhlobo kaYesu yaye wayehlala eBhethani, idolophana ekufutshane neYerusalem. YayinguLazaro, yaye wayenoodade wabo ababini, uMarta noMariya. Makhe sive ukuba iBhayibhile ithi kwenzeka ntoni.
Ngenye imini uLazaro ugula kakhulu. Ngeli xesha, uYesu ukwenye indawo ekude. Ngoko uMarta noMariya bathumela umntu oza kuxelela uYesu ukuba umntakwabo uLazaro uyagula. Isizathu saloo nto sikukuba bayazi ukuba xa uYesu efika uza kumphilisa umntakwabo. UYesu akangogqirha, kodwa unamandla awanikwe nguThixo okuphilisa nasiphi na isigulo.—Mateyu 15:30, 31.
Noko ke, ngaphambi kokuba uYesu akwazi ukuya kumbona, uLazaro ugula gqitha aze afe. Kodwa uYesu uxelela abafundi bakhe ukuba uLazaro ulele kwaye Yena uza kuya kumvusa. Abafundi abakuqondi oko uYesu akutshoyo. Ngoko ngokucacileyo uYesu uthi: “ULazaro ufile.” Oku kubonisa ntoni ngokufa?— Ewe, kubonisa ukuba kufana nokulala ubuthongo obunzulu. Obo buthongo bunzulu kangangokuba umntu akaphuphi nokuphupha.
Ngoku uYesu uze kutyelela uMarta noMariya. Sele kufike nabahlobo abaninzi baloo ntsapho. Beze kuthuthuzela la mabhinqa kuba umntakwawo efile. Esakuva ukuba uYesu uyeza, uMarta uyamkhawulela. Ngokukhawuleza noMariya uyaphuma ukuza kubona uYesu. Ebuhlungu gqitha yaye elila, uwa ezinyaweni zakhe. Abanye abahlobo abaye balandela uMariya nabo bayalila.
UMfundisi Omkhulu uyabuza ukuba bambeke phi na uLazaro. Kuthe kusenjalo, abantu bakhokelela uYesu kumqolomba angcwatywe kuwo uLazaro. Uthi akubona bonke abantu belila, naye uYesu aqalise ukulila. Uyayazi indlela ekubuhlungu ngayo ukuphulukana nomntu omthandayo ekufeni.
Njengoko kukho ilitye elivale umqolomba, uYesu uthi: “Lisuseni ilitye.” Ngaba bafanele balisuse?— UMarta akaqondi ukuba bamele balisuse. Uthi: “Nkosi, kungoku nje umele ukuba uyanuka, kuba ziintsuku ezine.”
Kodwa uYesu uthi kuye: “Anditshongo na kuwe ukuthi ukuba uyakholwa uya kulubona uzuko lukaThixo?” UYesu uthetha ukuba uMarta uza kubona isenzo esiza kuzukisa uThixo. Uza kwenza ntoni uYesu? Lakuba lisusiwe ilitye, uYesu uthandaza ngamandla kuYehova. Wandula ke uYesu akhwaze athi: “Lazaro, phuma!” Ngaba uza kuphuma? Ngaba unokukwazi?—
Ngaba wena unokumvusa umntu oleleyo?— Ewe, ukuba uyamkhwaza, uya kuvuka. Kodwa ngaba unokumvusa umntu olele ukufa?— Akunjalo. Nokuba ungakhwaza kangakanani na, umntu ofileyo akayi kukuva. Akukho nto unokuyenza, nkqu nam okanye nawuphi na omnye umntu wasemhlabeni namhlanje, ukuze avuse umntu ofileyo.
UYesu umenzele ntoni uLazaro?
Kodwa uYesu wahlukile. Unamandla akhethekileyo awanikwe nguThixo. Ngoko xa uYesu ebiza uLazaro, kwenzeka ummangaliso. Lo mntu wayefe iintsuku ezine uyaphuma kuloo mqolomba! Uphinda aphile! Uyaphefumla, uyahamba yaye uyathetha kwakhona! Ewe, uYesu uye wamvusa uLazaro ekufeni.​—Yohane 11:1-44.
Ngoku khawucinge ngako oku: Yintoni eyenzekayo kuLazaro ekufeni kwakhe? Ngaba inxalenye ethile yakhe—umphefumlo okanye umoya—yawushiya umzimba wakhe yaza yaya kuphila kwenye indawo? Ngaba umphefumlo kaLazaro waya ezulwini? Ngaba ngezo ntsuku zine wayelapho ephila kunye noThixo neengelosi ezingcwele?—
Akunjalo. Khumbula ukuba, uYesu wathi uLazaro ulele. Kuba njani xa wena ulele? Xa ukobunzulu ubuthongo, akuyazi into eqhubekayo ecaleni kwakho, akunjalo?— Yaye xa uvuka, awazi ukuba ubulele ixesha elingakanani de ujonge iwotshi.
Kunjalo ke nangabantu abafileyo. Abazi nto. Abeva nto. Yaye abanakwenza nto. Kwakunjalo ke nangoLazaro xa wayefile. Ukufa kufana nobuthongo obunzulu apho umntu angakhumbuli nanye into. IBhayibhile ithi: “Abafileyo, abazi nto konke konke.”​—INtshumayeli 9:5, 10.
ULazaro wayekweyiphi imeko xa wayefile?
Nantsi enye into omele uyicinge: Ukuba uLazaro wayesezulwini ngezo ntsuku zine, ngaba ngewayengazange athethe kwaukuthetha ngalo?— Yaye ukuba wayesezulwini, ngaba uYesu wayeya kumbuyisa kuloo ndawo ibalaseleyo?— Akunjalo konke konke!
Ukanti, abantu abaninzi bathi sinomphefumlo, yaye bathi umphefumlo uqhubeka uphila emva kokufa komzimba. Bathi umphefumlo kaLazaro wawuphila kwenye indawo. Kodwa iBhayibhile ayitsho njalo. Ithi uThixo wenza umntu wokuqala uAdam waba “ngumphefumlo ophilayo.” UAdam wayengumphefumlo. IBhayibhile iphinda ithi, xa uAdam wonayo, wafa. Waba ‘ngumphefumlo ofileyo,’ waza wabuyela eluthulini awayenziwe ngalo. Kwakhona iBhayibhile ithi yonke inzala ka-Adam izuze ilifa lesono nokufa.​—Genesis 2:7; 3:17-19; Numeri 6:6; Roma 5:12.
Kucacile ukuba, asinawo umphefumlo owahlukileyo emzimbeni wethu. Ngamnye kuthi ungumphefumlo. Yaye ekubeni abantu bezuze ilifa lesono kumntu wokuqala uAdam, iBhayibhile ithi: ‘Umphefumlo owonayo uya kufa.’​—Hezekile 18:4.
Kutheni kungekho sizathu sakuboyika abafileyo?
Abanye abantu bayaboyika abafileyo. Abasondeli emangcwabeni kuba becinga ukuba abafileyo banemiphefumlo engadibananga nemizimba yabo nenokwenzakalisa abaphilayo. Kodwa ngaba umntu ofileyo unokumenzakalisa ophilayo?— Akunjalo.
Abanye abantu bade bakholelwe ukuba afileyo banokubuya njengemimoya beze kutyelela abaphilayo. Ngoko bababekela ukutya aba bafileyo. Kodwa abantu abenza oko abakukholelwa ngokwenene oko uThixo akuthethayo ngokuphathelele abafileyo. Ukuba siyakukholelwa oko kuthethwa nguThixo, asisayi kuboyika abafileyo. Yaye ukuba simbulela ngokwenene uThixo ngobomi, siya kwenza oko akufunayo.
Kodwa usenokuzibuza: ‘Ngaba uThixo uya kubavusela ebomini abantwana abafileyo? Ngaba ngokwenene uyafuna ukwenjenjalo?’ Siza kuthetha ngako oku kwinqaku elilandelayo.
Masifunde ngokungakumbi eBhayibhileni ngemeko yabafileyo nangokuba ngumphefumlo komntu, kwiNdumiso 115:17; 146:3, 4 nakuYeremiya 2:34.